အင်တာဗျူး စစ်တွေ ဆန်ပြဿနာနေ့တွင် ပိုစတာ ဆိုင်းဘုတ် ရေးပြီး ဦးဆောင် ပါဝင်ခဲ့သူ
အမေရိကန် နယူးယောက် မြို့တွင်နေထိုင်သော ဦးခိုင်အောင်ကျာ်အား မေးမြန်းခန်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂတ်စ်လ ၁၃ ရက်နေ့သည် ၄၄ နှစ်မြောက် စစ်တွေ ဆန်ပြဿနာနေ့ ဖြစ်ပါသည်။ ဤနေ့ ဤရက်ကို ရောက်ရှိတိုင်း အငတ်ဘေး ပြဿနာကြောင့် ဆန်ရရှိရေး တောင်းဆို တိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံးခဲ့ရသော အပြစ်မဲ့ ရခိုင်ပြည်သူများအား ရခိုင်ပြည်သူများ အောက်မေ့ သတိရလျှက် ရှိကြ ပါသည်။ ...
Full story ဒေါက်တာ အေးကျော်နဲ့ အင်တာဗျူး ရခိုင်ပြည်နယ် ဆင်းရဲ နိမ့်ကျရတဲ့ အခြေခံအကြောင်းတရား (ဖတ်ရှု့နိုင်ပါပြီ) ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ လက်ရှိ မြန်မာ အစိုးရတွေရဲ့ လက်ထက်မှာ အဆင်းရဲ အနိမ့်ကျဆုံး နေရာကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ ...
Full story ရခိုင်အမတ် ၃ ဦး အမူရှုံးရတဲ့ ကိစ္စ ပါတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ အေးမောင်နဲ့ အင်တာဗျူး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီမှ အနိုင်ရ ပေါက်တောမြို့နယ် အမတ် ၃ ဦးကို ရွှေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ခုံရုံးက အရှုံးပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုလို ပြည်သူတွေ မဲနဲ့ အနိုင်ရထားတဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ဘာကြောင့် ကော်မရှင်ခုံရုံးက အရှုံးပေးလိုက်ရသလဲ ဆိုတာကို အများသူငါ သိရှိနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ပါတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာအေးမောင်ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားတာကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Full story ဒေါ်စုနဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် တွေ့ဆုံမူ အပေါ်
ဦးအေးသာအောင်ရဲ့ အမြင် သဘောထား ရတပ ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး (ဦးလှစောနဲ့ အင်တာဗျူး) ဂီရ်ိလေဘေးသင့် ပြည်သူတွေရဲ့ နောက်ဆုံး အခြေအနေ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၆ ဖွဲ့ စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းရာတွင် ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး ပါတီ ပါဝင်ခြင်း မရှိခြင်း အပေါ် ပါတီ ဒု ဥက္ကဌ ၂ ဗိုလ်မှူး ခိုင်မျိုးမင်းနှင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းခန်း ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီမှ ၀န်ကြီး နှစ်ဦး ဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်သောင်း၊ ပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ တို့ နှစ်ဦး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေး ပါတီနှင့် တွေ့ဆုံမူ အပေါ် ပါတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ အေးမောင်နှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းချက် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအေးကျော်နှင့် အင်တာဗျူး မြေပုံမြို့နယ်တွင် မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်များအား ကိုယ်တိုင် သွားရောက် ကူညီပေးနေသူ တဦးနှင့် ယနေ့ နံနက်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက် Media link
.: Arakanese Information .: Ald-Exile .: Arakan Info
.: Burma Net .: Burma Related News
.: Dr lunswe Blog .: National Council of the Union of Burma Set as homepage |
Contact | Free counter